Topnews:- Ganacsatada iyo Siyaasiyiinta Isaaq ee Al-Shabaab maalgeliya - Hadalkii Boqor Buurmadoow iyo Qeyladhaanta
Monday November 29, 2021 - 23:06:32 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com - Ganacsato iyo Siyaasiyiin u dhashay beesha Isaaq ayaa maalgeliya argagixisadda Al-Shabaab si aysan Muqdisho Nabad u noqon oo aqoonsi ku helaan. Sidoo kale iyaga ayaa maalgeliya argagixisadda Galgala joogta.
Boqor Buurmadoow wixii uu ogaay ayuu sheegay oo ah iney Ragga Dirta u madax yihiin Al-Shabaab sidaas darteedna ay ka dhgan yihiin Dowlad ka awood badan tan Federalka.
Waa jecel yihiin Axmed Godane iyo Ibrahim Afaghani maxaa yeelay waa kuwii gumaaday Hawiye ee qaraxyada kala daalay.
Xasan Dahir Aweys iyo Adan Xaashi Ceyrow oo ahaay labadii nin ee Muqdisho ku soo dhaweeyay midna duqeyn ayey ku dileen midna qol ayuu ku xiran yahay oo Doom ayuu uga baxsaday Baraawe.
Haddii aad Qadiyad iyo midnimo leedihiin oo ka dhiidhisaan dullinimada waa la idinka baqayaa, waana laga fogaanayaa in sidaas looga hadlo guryahiina laakiin hadaad tihiin dad liita oo aan damiir laheyn maalin kasta waxaa Canshuurta idinka qaadi doona Cabdiraxman Beyle, Kuraastiina waxaa dhici doona Fahad Yaasiin, waxaa dushiisa af amxaari uga hadli doono si jees jees leh Mahdi Guled, waxaa idaacadaha idinka caayi doono Osman Dubbe , waxaa alalaas iyo caay isugu kiin diri doono Khadiijo Diiriye, waxaana hortiina tacsi ka diri doono Boqor Buurmadoow oo ku faanaya inuu aad u jeclaay Axmed Madoobe.
Haddii dhalinyaro ka dhiidhiisa liidnaantaan la waayo waxaa Villa Somalia sii jooga doona Farmaajo 21 sano ugu yaraan maxaa yeelay waxaad tihiin "DAMEER MALAB SAARAN"